United Airlines kudzinga vashandi mazana mashanu nemakumi matatu nemapfumbamwe varamba kubaiwa nhomba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » United Airlines kudzinga vashandi mazana mashanu nemakumi matatu nemapfumbamwe varamba kubaiwa nhomba
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
United Airlines yaive yekutanga mutakuri weUS kumisikidza COVID-19 mvumo yekudzivirira kune vashandi vayo kutanga kwaNyamavhuvhu. Dzimwe ndege dzeUS dzanga dzisingateedzere kutevedzera, asi dzakatamiswa kuti dzipedze kudzivirirwa kwevashandi vasina kuvharirwa vanoongorora hutachiona.
Vashandi veUnited Airlines 'zviuru makumi matanhatu nenomwe vekuUS vakarairwa kuti vape humbowo hwejekiseni neMuvhuro wadarika.
United Airlines zvakadaro, ichabvumidza vashandi kuchengetedza mabasa avo kana vakabayiwa nhomba asi vakatadza kuendesa humbowo nenguva yakatarwa.
Vashandi vasina kubaiwa majekiseni vane mavhiki akati wandei vari pasi pemitemo yemubatanidzwa yazvino yekudzora kana vachida kugara.
United Airlines yakaraira vashandi vayo zviuru makumi matanhatu nenomwe vekuUS kuti vape humbowo hwejekiseni neMuvhuro wadarika.
Iye zvino vashandi vekambani mazana mashanu nemakumi matatu nevatatu vakatarisana nekuburitswa mushure mekukundikana kutevedzera mutemo wekubaya nendege 'COVID-593.
"Ichi chaive chisarudzo chakaoma zvisingaite asi kuchengetedza timu yedu yakachengeteka kwagara kuri kwedu kwekutanga," akadaro maneja weChicago-based airline, Scott Kirby nemutungamiri Brett Hart mune memo kuvashandi.
Nepo ruzhinji rwe United Airlines'vashandi vakateedzera mutemo wekambani, vashandi makumi mashanu nevapfumbamwe vakaramba kubatwa jasi uye vakatadza kunyorera mukana wekuti varegererwe zvitendero kana zvekurapa izvo zvakamisikidzwa nekambani iyi mukutadza kubaya nhomba.
"Pfungwa yedu yekuda jekiseni revashandi vese veUnited-based US yaive yakapusa - kuchengetedza vanhu vedu kuchengetedzeka - uye chokwadi ndechekuti: munhu wese anochengeteka kana munhu wese abayiwa jekiseni, uye zvinoda jekiseni zvinoshanda," United yakadaro mumemo.
United Airlines zvisinei, zvinobvumidza vashandi kuti vachengete mabasa avo kana vakabayiwa jekiseni asi vakatadza kuendesa humbowo nenguva yakatarwa, kana kana vachizobvarurwa danho repamutemo rekudzinga risati rasvika.
Izvi zvinoreva kuti vashandi vasina kubayiwa jekiseni vane mavhiki akati wandei kana kunyangwe mwedzi pasi pemutemo wevashandi wekudzingwa basa kuti vachengetwe kana vachida kugara.
United Airlines yakazivisa kutanga kwemwedzi uno kuti yaizoisa vashandi vasingabvisirwe simba rekudzivirira mushonga pamabhadharo asina kubhadharwa kana ekurapwa kubva muna Gumiguru. Chirongwa ichi chakazobviswa mushure mekunge nyaya yakamhan'arwa nevashandi vatanhatu yakwidza danho iri. Vamwe vashandi zviuru zviviri kusvika ikozvino vakumbira kuregererwa.
United Airlines yaive yekutanga mutakuri weUS kumisikidza COVID-19 mvumo yekudzivirira kune vashandi vayo kutanga kwaNyamavhuvhu. Dzimwe ndege dzeUS dzanga dzisingateedzere kutevedzera, asi dzakatamiswa kuti dzipedze kudzivirirwa kwevashandi vasina kuvharirwa vanoongorora hutachiona. Georgia-yakavakirwa Delta Air yakarova $ 200 pamwedzi inishuwarenzi yehutano mutero kune vashandi vasina kubayiwa nhomba.
Kufanana nedzimwe ndege zhinji, United yakarohwa zvakaomarara nedziviriro-yakakonzerwa nezvirambidzo zvekufamba, zvichitorera vamwe vashandi zviuru makumi matatu nezvitatu pakukwira kwedambudziko gore rapfuura.